imveliso yokutya yeefish
1.Umveliso wokutya wentlanzi unokuvelisa iintlobo ezahlukeneyo zeepellets zeentlobo ezahlukeneyo zeentlanzi kubandakanya iipellets zeHalibut, Iicatfish zepellets, CatCarp pellet, Iipellethi zerout, Iipellets ze-Hemp, I-CSL pellets,njl.
2.Lo mveliso wokutya weentlanzi usanda kuphuhliswa ukuze uhlangabezane nemfuno yokuveliswa ngamandla kweepellets zokutya kwezilwanyana.
Lo mveliso wokutya weentlanzi usanda kuphuhliswa ukuze uhlangabezane nemfuno yokuveliswa ngamandla kweepellets zokutya kwezilwanyana. Ngamagama amaninzi okuloba umgca wokuveliswa kokutya kweentlanzi unokuvelisa ukutya okuneentlanzi, ukuntywila kwintlanzi, ukutya kwezilwanyana zasekhaya, ukutya kwemfuyo, njl. Iimveliso zinokuba neemilo ezahlukileyo, incasa ekhethekileyo, izakha-mzimba ezityebileyo kunye nokuthungwa okuhle ukuze uhlangane nendlela eyahlukileyo yokutya kwizilwanyana. Ulawulo lwe-automation oluzenzekelayo kunye nokusebenza ngempumelelo kwemveliso, umveliso wethu wokutya weentlanzi ngowona khetho lufanelekileyo kwimigangatho yokutya enkulu kunye nenkulu kunye neefama zokufuya. Umzi mveliso wethu wokutya wentlanzi unokuvelisa iintlobo ezahlukeneyo zeepellets zeentlobo ngeentlobo zeentlanzi kubandakanya iipellets zeHalibut, Iicatfish zepellets, CatCarp pellet, Iipellethi zerout, Iipellets ze-Hemp, I-CSL pellets,njl.
Indawo yethu yokuvelisa ipellet yokutya yintlanzi yinkqubo epheleleyo yokuveliswa kwemveliso yeepellet enomthamo wama-300-400kg / h. Lo mveliso wokutya weentlanzi uyilelwe ukwenza iipellets zorhwebo zombona, umbona, ingca, amazimba, iprotein, iinyibiliki njalo njalo, kunye neepellets zokugqibela ezinemilo eyahlukeneyo, incasa ekhethekileyo, izondlo ezityebileyo kunye nokukhanya okufanelekileyo,kwaye lo mveliso wokutya wokudada weentlanzi adada asetyenziswa ngokubanzi njengamanzi kunye nokutya kwezilwanyana zasekhaya njengokutya kwegolide, intlanzi eshushu, intlanzi yekati, iimbadada, inja, ikati njl njl.. Ulawulo oluzenzekelayo oluzenzekelayo, ukusebenza ngempumelelo okuphezulu, Umgca wokuveliswa kweentlanzi zethu ezidadayo lolona khetho lulungileyo kwiimayile eziphakathi nendawo ezinkulu zokutya kunye neefama zokufuya. Imigca yemveliso egqibeleleyo ye-pellet enobuchule obahlukeneyo bayakhona ukuhlangabezana neemfuno ezithile zabathengi.
Amanqanaba eMveliso yeFisher feed yePellet
1. Itekhnoloji ethe xhaxhe, umthamo ophezulu kunye nokusetyenziswa okuncinci kwamandla.
2. Ubume bemodyuli bulungele ukuhlangana kunye ne disassembly, ukuhambisa ukuthutha kunye nokufakwa.
3. I-PLC ilawulwa, isixhobo se-alamu siyafumaneka. Umsebenzi ulula kwaye ululungele.
4. Imilo yokugqibela ye-pellet kunye nobukhulu inokuhluka ngokutshintsha kobumba. Kwintlanzi kunye ne-shrimp feed pellet, ixesha lokuntywila emanzini linokuhlengahlengiswa ngohlengahlengiso lweqondo lesidanga.
5. Ukucutshungulwa kwenziwa kwinkqubo yobushushu ephezulu ngokukhawuleza, ukunciphisa kakhulu ukubola kwezakha mzimba ekutyeni, kwangaxeshanye phucula iprotein (ngokuduka kweprotein) kunye nesitatshi (ngokuncamathisela isitashi) isisu, ukuphucula amandla emveliso.
6. Ukuqinisekisa umgangatho kunye nomthamo, kukho isixhobo esonyukayo soxinzelelo. Ngaphandle koko, isixhobo shushu sombane siphucula indlela yokwandiswa kwesondlo.
Inkcazo egcweleyo yeMveliso yokuFumaneka kweNtlanzi
● Izinto eziluhlaza Iipellethi zokutya zibandakanya iproteni yezilwanyana kunye neproteyini yezityalo. Iprotein yezityalo ivela kumbona, irayisi, ingqolowa, isoya, ipani yekhekhe yomgubo, njl; Iproteni yezilwanyana ivela ekutyeni kwentlanzi, isidlo sangombala, isidlo se crab, isidlo-intlanzi yokutya njalo njalo unokongeza esinye isithako ngokweemfuno kunye nokutya kwezilwanyana.
● Iinkqubo ezibandakanyiweyo ikakhulu kukugaya izixhobo, ukuxutywa kwezinto, iipellets ezikrwada, i-pellets isomisa, kunye nokupakisha kwepellet. Yonke Inkqubo yokuVelisa ngeNtlanzi inokulawulwa ngokuzenzekelayo.
● Umthamo wemveliso 0.06 ukuba 5 iitoni ngeyure nganye ziyafumaneka.